आज वृषलाई आर्थिक लाभ, कस्तो-कस्तो छ अन्य राशिको ग्रहफल ? [दैनिक राशिफल]- Today's Horoscope
HomeRashifalआज वृषलाई आर्थिक लाभ, कस्तो-कस्तो छ अन्य राशिको ग्रहफल ? - Today's...
आज वृषलाई आर्थिक लाभ, कस्तो-कस्तो छ अन्य राशिको ग्रहफल ? [दैनिक राशिफल]- Today’s Horoscope
काठमाडाैं l २०७८, साल चैत महिनाको २० गते आज आइतबार । तद्नुसार अप्रिल महिनाको ३ तारिक २०२२ । चैतशुक्लपक्ष द्धितीया, अश्विनी नक्षत्र, वैधृति योग, चन्द्रमा मेष राशिमा रहेको छ । आज विहान सूर्योदय ५ः५५ मा हुनेछ भने सूर्यास्त १८ः२२ मा हुनेछ ।
मीन(दी.दु.थ.झ.ञ.दे.दो.च.ची) : बिहान सूर्योदयको दर्शन गरेर नजिक वा देवालयको दर्शन गर्नु उत्तम छ । अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । कुनै नयाँ काम गर्न खोज्नुभएको छ भने आइतवारको दिन तपाईको लागि उत्तम दिन हो । साँझको समयमा परिवारका सदस्यलाई केही खानेकुरा उपहार दिनुहोला । शिवालयको आरती दर्शन गर्नुहोला । सिर्जनात्मक कार्यमा समय खर्च गर्नुहोला। Todays Horoscope aajako rashifal
Previous articleथप १० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि, ९० जना सङ्क्रमण मुक्त
Next article२४ घण्टामा २३ संक्रमित थपिए : ६६ जना डिस्चार्ज- covid news update